NDI UWE OJII ANWỤCHIELA MMADỤ ATỌ JI “ENYEM-AKA” EZU N’ENUGWU – hoo!haa!!
Ndi uwe ojii nke steeti Enugwu ejichikọọla mmadụ atọ aka ọrụ ha bụ isi n’ụzọ ha kpọrọ enyemaka, nara ndi mmadụ akwụkwọ eji adọrọ ego n’ụlọ akụ, ana-akpọ ATM, N’Enugwu.
Mgbe ọ na-ekwu okwu n’Enugwu ụnyahụ, ka ọnụ na-ekwuru ndi uwe ojii n’Enugwu, bụ Ebere Amaraizu sịrị na ndi uwe ojii siri n’aka ndi omekome a nweta akwụkwọ ndọta ego bụ “ATM CARD” dị iri atọ n’ọnụ ogụgụ, bụ nke ndi mmadụ ọzọ dị iche iche.
Amarizu sịrị na ọbụ ngalaba ndi uwe ojii na-ahụ maka mgbochi otu nzuzo, mara imi n’ala ma nwụchikọọ ndi a, mgbe ha nwetegasịrị ụmụ ozi dị añaa gbasara ndi omekome a.
Ọ sịrị na ndi-oji aghụghọ ezu a egwularala ọtụtụ ndi mmadụ ego ha n’ụlọ ọba ego, ebe ha na-egosi na ha chọrọ inyere ha aka pịpụtara ha ego ha, mgbe ha na-enwe ihe nhịa ahụ n’ime nke a.
Ọ sịrị n’ụzọ dị etu a, na ha na-ewere akwụkwọ nke ijabu ha ji, gbanwere nke onye ha kwuru na ha chọrọ inyere aka ma nyoputakwa akara nzuzo nke onye ahụ ji adọrọ ego ya, were gbalaga.
Amaraizu sị n’ụzọ dị etu a, ka ndi omekome a na-esi dọchakọrọ ego onye ahụ n’otu ntabi anya.
Ọ kpọpụtara aha mmadụ atọ ndi a dịka: Chinweụba Ogodo bụ onye Ezaa nke steeti Ebọnyị, na-agba ụgbọala ‘keke’ n’Enugwu’, Okechukwu Nwoke, onye Ahiazụ Mbaise nke steeti Imo, na-anya ụgbọ-ala bọs nakwa Sọpụrụchi Imanel bụkwa onye Alayị nke Bende na steeti Abịa. Mmadụ atọ ndi a bi n’Enugwu.
Amaraizu kwuru na Ogodo kwara arịrịṅ n’ihi na ya amaghị ihe ndi otu ya na-eme. Ọ sịri na Ogodo kwuru na dịka onye ọkwọ ụgbọ, na ha na-enye ya dịka ọrụ ngo ka ya buga ha n’ụlọ ọba egọ ebe ndi mmadụ bara ụba n’ọgbara ndọrọ ego, bụ ebe ha na-anọrọ n’akụkụ chọpụta onye ha ga-eme kpọpịị-saa.
Ọnụ na-ekwuru ndi uwe ojii a kwuru na-amalitela ịma imi n’ala maka ịchọpụta ka ndi a si agbanye mmiri n’opi ụgbọgọrọ.
Ọ dọrọ ndi mmadụ aka na ntị ka ha kpachara anya ma zeere ndi oso chi egbu a na-abịakwute ha n’ụlọ ọba ego n’ụdị ndi enyemaka.
Previous Post: AGBAGBUELA OTU ONYE WELITERE ISI N’ OTU NDỌRỌ NDỌRỌ ỌCHỊCHỊ APC NA STEETI EKITI
Next Post: HOOHAA! OHERE ADỊGHỊ N’OBI GỌỌMENTI ENUGWU – Bishọp Chukwuma